कपालको बृद्धि गर्नका लागि १० सजिलो र सरल सुझावहरू - कपाल
कपालको बृद्धि गर्नका लागि १० सजिलो र सरल सुझावहरू
कुनै पनि महिला कुनै पनि बिन्दुमा उनको कपालको लम्बाइबाट कहिल्यै खुशी हुँदैन, र त्यसैले, एक उपयोगी र सजिलो कपाल वृद्धि टिप सधैं सराहना गरिन्छ। यो तपाईंको लेट क्रिसमसको उपहारलाई विचार गर्ने क्रममा हामीसँग तपाईंको लागि १० महान कपाल बृद्धि सुझावहरू छन् त्यसैले तपाईं रापन्जल-जस्तो कपाल पाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले सँधै सपना देख्नुहुन्छ। यी ह्याकहरूमा के सामग्रीहरू समावेश छन् जुन तपाईं सजिलै आफ्नो भान्साकोठामा पाउनुहुनेछ।
यद्यपि हामीले सुझावहरूमा डुबुल्की मार्नु अघि, यो बुझ्नु महत्वपूर्ण छ कि कुनै पनि दुई व्यक्तिको समान कपाल हुँदैन। डीएनए जस्तै, हामी सबैको अद्वितीय कपाल बनावट, प्रकार र गुणहरू हुन्छन्, तपाईंले आफ्नो कपाल कसरी राख्नुहुन्छ साथ साथै तपाईंको वातावरणले तपाईंको ट्रेसमा पार्ने प्रभावलाई पनि उल्लेख गर्दैन। त्यसोभए यो सम्भव छ कि तल दिइएका केही सुझावहरूले तपाईंको लागि काम गर्ने छैनन् र उनीहरूले अरु व्यक्तिको लागि पनि काम गर्ने छन।
दुर्भाग्यवश, धेरै व्यक्तिगतकृत हेयर केयर उत्पादनहरू बजारमा तपाईंको प्रत्येक कपाल दु: ख सम्बोधन गर्न उपलब्ध छैनन्। तर राम्रो संग जग स्थापना पौष्टिक खाना र कपाल हेरचाहको व्यवस्था पछ्याउँदा कपालमा ठूलो वृद्धि हुन मद्दत गर्दछ। यहाँ केहि अन्य सुझावहरू र युक्तिहरू छन् कि कपाल विकास बढावा ।
१ तपाईंको स्क्याल्प मालिश गर्नुहोस्
दुई नियमित ट्रिमिंग
3 सन्तुलित आहार कायम राख्नुहोस्
चार शैम्पू सहि
।। एक चामल पानी कुल्ला मा लिप्त
। तेल तपाईंको नियमित तवरले
।। एक नीम र आमला मास्क लगाउनुहोस्
।। एलो भेरा जेल प्रयोग गर्नुहोस्
9 एक DIY कफी कन्डिसनर प्रयास गर्नुहोस्
१० एउटा अण्डको मास्क प्रयोग गर्नुहोस्
एघार कपालको बृद्धिमा सोधिने प्रश्नहरू
तपाईंको स्क्याल्प मालिश गर्नुहोस्
नियमित स्क्याल्प स्मालको मालिशले तपाईंलाई आराम दिन्छ, तर यसले रक्त संचारलाई सुधार गर्दछ र कपाललाई जराबाट बलियो बनाउँदछ। खोपडीको मसाज तनावको सामना गर्न पनि एक उत्तम तरीका हो, कपाल झर्ने प्रमुख योगदान पुर्‍याउने मध्ये एक।
सुत्नु अघि हप्तामा दुई पटक तपाईको टाउकोको मालिस गर्नुहोस्। यसले स्वस्थ निद्रा चक्रलाई मात्र होइन प्रोत्साहन दिन्छ स्वस्थ कपाल विकास ।
सुझाव: राम्रो पुरानो नरिवल तेल जाने उत्तम तरिका हो। तर तपाईं हाइड्रेटिंग पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ कपाल मास्क वा serums खुवाउन को लागी तपाईंको कपालमा भिटामिन र मालिश गर्दा टाउकोको छाला।
हाम्रो कपाल तीन चरणहरूको माध्यम बाट जान्छ। पहिलो चरण, एन्टिजेन हो, जब यसको सक्रिय र कपाल कोषहरूमा कोषहरू र छिटो विभाजन। दोस्रो चरण, क्याटागेन, कपालको बृद्धि रोकिन्छ र बाहिरी जरा म्यान संकुचित हुन्छ र आफैलाई कपालको जडमा जोडिन्छ। विभाजन समाप्त हुन्छ, कपाल पातलो हुनु र विच्छेदले अन्तिम चरणमा चिन्ह लगाउँछ, टेलोजेन। तपाईंको कपाल छाँट्न तपाईंलाई तेस्रो चरणबाट बच्न मद्दत गर्दछ, यसैले तपाईंको कपाल बढ्दै जानको लागि ईच्छा राख्दछ। आवधिक हेयर ट्रिमिंग सत्रहरूका लागि तपाईंको क्यालेन्डरहरू चिन्ह लगाउनुहोस्। कपालको बृद्धि गर्न आधा वा एक इन्च काट्नुहोस्।
सुझाव: ट्रिमिंगले बिग्रिएको वा सुस्त कपालको मुद्दाहरूको पनि समाधान गर्दछ, त्यसैले प्रत्येक दुई महिना वा सो भन्दा बढि तपाईंले सुनिश्चित गर्नुहुनेछ।
सन्तुलित आहार कायम राख्नुहोस्
यसको खानाबिना केही पनि बढ्दैन। बोट बिरुवालाई सूर्यको किरण चाहिन्छ, सर्पलाई भ्यागुताहरू चाहिन्छ र तपाईंको कपाललाई पौष्टिक आहार चाहिन्छ जुन तपाईंले खानुहुन्छ। पालक, अण्डाको पहेंलो, केरा र किशमिश जस्ता खाद्य पदार्थहरू प्रोटीनयुक्त हुन्छन् र भिटामिन जसले कपालको बृद्धिलाई बढावा दिन्छ । सोडियम खपत, कार्बोनेटेड पेय र चिनीको उच्च स्तरबाट बच्न यो पनि राम्रो विचार हो जुन केशको बृद्धि हुनको लागि अवरोध हो।
सुझाव: औंठाको सामान्य नियमको रूपमा, भिटामिन ए, सी, फलाम र ओमेगा-मा धनी कुनै पनि कुरा तपाईंको कपालको लागि राम्रो हो।
फोहोर सulation्ग्रह र सूर्यको प्रकाशले तपाईंको कपाललाई थकित र भंगुर बनाउँदछ। यसैले तपाईको कपाल गुनगुनाएको पानीमा धुनु महत्वपूर्ण छ। जहाँसम्म, अत्यधिक कुल्चन कपालको विकासको लागि हानिकारक हुन सक्ने रूपमा सावधानीपूर्वक व्यायाम गर्नुहोस्। भिजेको कपाल जराहरू कमजोर हुन जान्छन् र बारम्बार शैम्पू गर्दैमा तपाईंको स्क्याल्पको गडबडी गर्न सक्छ प्राकृतिक तेल गठन र pH स्तरहरू। साथै, यो सल्लाह दिईन्छ कि अत्यन्तै तातो पानीले कपाल न धुनु।
सुझाव: स्टोरले किनेका शैम्पूहरूमा रहेको रसायनहरू प्राय: यसको उद्देश्यसँग विपरित कार्य गर्दछन्। नियमित प्रयोगको लागि सल्फेट-रहित र जैविक शैम्पूहरू छान्ने प्रयास गर्नुहोस्। वा तपाईं घरमा आफ्नै शैम्पू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कसरी छ।
एक चामल पानी कुल्ला मा लिप्त
यो ट्रिक ह्वांग्लुको चिनियाँ गाउँको हो, लोकप्रिय रपन्जेलको भूमिको रूपमा परिचित छ। त्यहाँका महिलाहरू उनीहरूको लामो लामो कपडाका लागि परिचित छन्, जसले उनीहरूलाई गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा स्थान दिए। चामलको पानी एशियाको उमेरदेखि नै कपालको विकासको लागि उत्तम राखिएको रहस्य हो। खाना पकाए पछि सि precious्कमा यो बहुमूल्य औषधि त्याग्नुको सट्टा, यसमा आफ्ना कपाल भिजाउनुहोस्। त्यहाँ उपस्थित एमिनो एसिड र कार्बोहाइड्रेट्सले तपाईको कपाललाई मात्र केही मात्रा प्रदान गर्दछ तर यसले क्षतिबाट पनि बचाउँछ।
सुझाव: निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो भात पकाउँदा केहि थप पानी प्रयोग गर्नुभयो ताकि तपाईंसँग तपाईंको कपालको लम्बाइ पखाल्न पर्याप्त पानी छ।
तेल तपाईंको नियमित तवरले
पोषण र प्राकृतिक रूपमा यसलाई ओसिलो बनाउनको लागि तेलमा तेल लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन। नरिवल तेल, क्यास्टर तेल र जोजोबा तेल सबै जरा देखि सुझावहरु मा कपाल मजबूत र विभाजन समाप्त को घटना कम गर्न सक्नुहुन्छ। बजेट कपाल हेरचाह उत्पादन, सामान्यतया, तिनीहरूमा एन्टी-फंगल र जीवाणुरोधी गुणहरू हुन्छन्। यसले स्क्याल्पमा ओसलाई कायम राख्न र माइक्रोबियल गतिविधिहरू रोक्न मद्दत गर्दछ जसले अक्सर डन्ड्रफ निम्त्याउँछ। तिनीहरूमा रहेका खनिजहरूले कपालको गुणस्तर सुधार गर्दछ र विकासमा मद्दत गर्दछ।
सुझाव: कम्तिमा हप्तामा एक पटक तातो तेल मालिशमा लिप्त हुनुहोस्, र केही थप्नुहोस् करी पातहरू राम्रो बृद्धि र एक ठूलो गन्धको लागि तेलमा।
एक नीम र आमला मास्क लगाउनुहोस्
एक महान को लागी बनाउने कपाल झर्नेको लागि आयुर्वेदिक उपचार , कृपया र आंवला दुईवटा सजिलैसँग उपलब्ध क-वर्ग घटक छन् कपालको बृद्धिको लागि। तपाईं तिनीहरूलाई टाँस्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको कपालमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ वा सीधा उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी जडिबुटीहरूले गुणहरू समात्छन् जुन तपाईंलाई चमकदार, स्वस्थ र स्वस्थ लकहरू दिन सक्छ। नीममा एन्टिब्याक्टेरियल गुणहरूले तपाईंको ट्रेसलाई स्वस्थ बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ।
सुझाव: लिनुहोस् र आँवला निकाल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ दैनिक रूपमा लागू गर्न सकिन्छ एक कपाल सीरम को रूप मा। यसले तपाईंको स्क्याल्पलाई चिसो बनाउँदछ र तपाईंको कपालको बृद्धि प्रक्रियालाई गति दिन्छ।
एलो भेरा जेल प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईं आफ्नो कपाललाई केवल एलोवेराको साथ पूर्ण स्पा उपचार दिन सक्नुहुन्छ। यो उत्तम मोइश्चराइजर, सफा गर्ने एजेन्ट, मर्मत गर्ने र कपालका कणहरूका लागि सुदृढीकरण गर्ने एजेन्ट हो। एलोवेरा जेलको साथ तपाईंको स्क्याल्पलाई बिस्तारै मालिश गर्नाले तपाईंको टाउकोको छाला र दिमाग मात्र थाम्दैन, तर एलोभीरा पनि हुन्छ भिटामिन ए, बी, बी १२, र सी, र फोलिक एसिड, सबै सेल पुनरुत्थान र कोशिका बृद्धि गर्न योगदान। यसको कोलेजेन सम्पत्तीले तपाईंको कपालको लागि चर्को सूर्यको विरूद्ध सक्रिय लेयरको रूपमा कार्य गर्दछ।
सुझाव: यदि तपाईंसँग ताजा-फसल Aloe Vera जेल को लागी पहुँच छैन, एक राम्रो गुणवत्ता स्टोर खरीद गरिएको उत्पाद प्रयोग गर्नुहोस्।
एक DIY कफी कन्डिसनर प्रयास गर्नुहोस्
कफी कपाल को विकास को लागी एक छोड़-मा कंडीशनर को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले स्क्याल्प डिटोक्सिफाइ गर्दछ र रगत सर्कुलेशनलाई बढावा दिन्छ, यसमा रहेको फाइटोस्टेरोललाई धन्यवाद। यो क्याफिन हो जसले कपाल चिल्लो र चमकदार बनाउन मद्दत गर्दछ। तपाई यसलाई हेयरस्प्रेको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कफिले पुरुष र महिला दुबै समयपूर्व खैरो कपाल वा बाल्टिनलाई रोक्न मद्दत गर्दछ।
सुझाव: ब्रिउड कफि पाउडर मह जस्तो सामग्रीको साथ मिसिए जैतुनको तेल र दही घरेलु हेयर मास्कको रूपमा काम गर्न सक्दछ जसले कपालको बृद्धि प्रक्रियालाई ठूलो लाभ गर्दछ।
एउटा अण्डको मास्क प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईलाई गन्ध वा मनपर्न सक्छ, तर अण्डाको पिण्ड प्रयोग गर्नु सबैभन्दा सजिलो छ तपाइँको कपाल को बृद्धि गर्न तरिका । अण्डा भिटामिनको एक पावरहाउस हो र फलाम, सोडियम र लेक्टिनको स्रोतको रूपमा कार्य गर्दछ जुन कपालको विकासको लागि आवश्यक छ। ती क्षीय रोक्ने क्रममा तपाइँको कपाललाई ओसिलो र पोषण दिन्छन्। अण्डाको भुईँ र तेल भत्काउन को नियमहरू द्वारा भंगुर र सुस्त कपाल बहाल गर्न मद्दत गर्दछ।
सुझाव: तपाईं दालचीनी र महको साथ अण्डाको पहेंलो मिश्रण गरेर आफ्नो कपालबाट गन्धबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। यसले सजीलो गर्न सकिने कपालको मास्कको रूपमा कार्य गर्न सक्छ।
कपालको बृद्धिमा सोधिने प्रश्नहरू
Q. के यो कपाल विकासको लागि कपाल पूरकहरू लिन सुरक्षित छ?
TO पूरकहरू जस्तै बायोटिन, भिभिसियल र अन्य मल्टीभिटमिन ट्याब्लेटहरू प्रचार गर्न मद्दत गर्न सक्छ छिटो कपाल विकास । यद्यपि कुनै पनि औषधि लिनु अघि तपाईंको चिकित्सकसँग जाँच गर्नु आवश्यक छ। साइड इफेक्ट केहि मा देख्न सकिन्छ, मानिसहरू औषधी फरक फरक प्रतिक्रिया रूपमा। यो सँधै सुरक्षित बन्छन् बरु राम्रो निद्रा चक्र, सन्तुलित आहार र पर्याप्त पानी सेवनको लागि।
Q. यो कपाल बढ्न को लागी कति समय लाग्छ?
TO रातारात परिवर्तनको आशा नगर्नुहोस् किनकि तपाईंले कपालको रातो रातो मास्क छोड्नुभयो। कपालको बृद्धिलाई यसको आफ्नै समय लाग्छ र हामी यसलाई मात्र एउटा तरिकामा बढाउन मद्दत गर्न सक्छौं प्राकृतिक प्रक्रिया कुनै पनि विदेशी तत्वले बाधा पुर्‍याएको छैन।
अध्ययनहरू भन्छन कि सामान्य अवस्थामा एक महिनामा औसत आधा इन्च वृद्धि हुन्छ। यसको अर्थ प्रति बर्ष छ इन्च छ। लगातार हेरचाह र तपाइँको कपाल हेरचाहको तालिकामा टाँसेको छिटो परिणाम देखाउन सक्छ। तनाव, उच्च रक्तचाप र डिप्रेसन तपाईको कपाल विकास प्रक्रियामा हानिकारक हुन सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् - Natural प्राकृतिक सामग्रीहरू तपाईले तेलको सट्टा केशलाई चिसो गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ
कपाल झर्ने रोक्न उत्तम तरिका
कसरी अनुहारमा कपालको वृद्धि घटाउने
schedule बर्ष पुरानो को लागी दैनिक तालिका
घुम्रेको कपालको लागि कपाल